Wasaaradda Caasimaadka oo ku hanjabtay in ay tallaabo ka qaadeyso hey’ad laga leeyahay Turkiga – Hornafrik Media Network
Wasaaradda Caasimaadka oo ku hanjabtay in ay tallaabo ka qaadeyso hey’ad laga leeyahay Turkiga
Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada ee xukuumadda Soomaaliya ayaa ku hanjabtay in ay qaadeyso tallaabo ka dhan ah isbitalka Yardimeli ee magaalada Muqdisho oo ay maamusho hey’ad laga leeyahay dalka Turkiga.
War-saxaafadeed goor dhaw kasoo baxay wasaaradda caafimaadka ayaa lagu sheegay inuusan jirin heshiis shaqo iyo mid howlgelin oo kala dhexeeya hey’adda maamusha isbitaalka Yardimeli.
“Wasaaraddu waxay xaqiijinaysaa in hey’adaas shaqada ay ka wado Isbitaalka Yardimeli iyo howlaha caafimaad ee kale ay yihiin howlo baal marsan sharciga iyo qawaaniinta dalka u dagan,” ayaa lagu yiri warqadda.
Qoraalka ayaa intaas ku daray “Waxay Wasaaradda Caafimaadka ka qaadanaysaa dadka u bareeray jabijnta sharciga iyo ku tumashada qawaaniinta tallaabo adag oo waafaqsan sharciga dalka iyo qawaaniinta caalamiga ah.”
G/Gacal oo ku celiyey in doorashada halka dhinac u diyaarsanyahay ay berri dhaceyso